“ကလေးတွေရဲ့ အမူအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပစ်မထားသင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်” – Barnyar Barnyar
မိဘဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရတာ အမြဲတမ်းတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက် လိမ္မာယဉ်ကျေးဖို့၊ ပညာတတ်ဖို့၊ ဘဝကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အချိန်တွေ အများကြီး ယူရပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ တချို့ အပြုအမူတွေကို မသိချင်ယောင် ဆောင်ထားလို့ မရပါဘူး။
1. တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူကို မပြောပြတတ်ခြင်း
အတင်းအဖျင်း ပြောခြင်းနဲ့ နိုးနိုးကြားကြား ရှိခြင်းတို့ရဲ့ကွဲပြားပုံကို ကလေးသိအောင် ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးပြောသမျှကို အေးအေးဆေးဆေး နားထောင်ပေးသင့် ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကလေးနဲ့ မိဘကြားမှာ ပြဿနာတွေ ရှိလာတဲ့အခါ ဖြေရှင်းရ လွယ်ကူသွားပါတယ်။
2. မောင်နှမအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း
ကလေးတွေကို ဘက်မလိုက်ဘဲ မျှမျှတတ ဆက်ဆံပေးဖို့ လိုပါတယ်။ မောင်နှမအချင်းချင်း လေးစားမှု ထားရခြင်းရဲ့ အရေးကြီးပုံကို ရှင်းပြပေးပါ။ ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီ ကိုလည်း အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ မောင်နှမအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်မှု နည်းလာပြီး ရင်းနှီးလာမှာပါ။
3. ခို းခြင်း
ကလေးက ခိုးတတ်နေပြီဆိုရင် သင့်စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ် ထားလိုက်ပါ။ ကလေးက ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ခိုးရင် ခိုးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိအောင်လုပ်ပြီး ခိုးခြင်းက မကောင်းတဲ့ အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း သေချာ ရှင်းပြသင့် ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးကို ခိုးတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြန်ပေးဖို့၊ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကို တောင်းပန်ဖို့ ရှင်းပြသင့် ပါတယ်။ ကလေးက ခိုးပြီးရင်း ခိုးနေရင် စိတ်ရောဂါ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ရင် ကလေးမှာ ခိုးတဲ့အကျင့် ပါသွားမှာပါ။
4. မလေးမစား ဆက်ဆံခြင်း
ကလေးက မိဘတွေကိုသာမက တခြားသူတွေကိုပါ မလေးမစား ဆက်ဆံနေရင် စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဆန္ဒကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ဖော်ပြတတ်အောင် ကလေးကို သင်ပေးပါ။
ကလေးက အမှားတစ်ခုခု လုပ်မိရင် အလွန်အမင်းကြီး မဆူသင့်ပါဘူး။ ရိုးသားမှု၊ ယုံကြည်မှုတို့ရဲ့ အရေးပါပုံကို ကလေးကို ရှင်းပြပါ။ ကလေးနဲ့ သင့်တော်မယ့် ပြစ်ဒဏ်ကိုပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးက လိမ်တတ်၊ ညာတတ်နေရင် ကလေးမှာ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေတဲ့ လက္ခဏာပါ။ အဲဒီအခါ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ရှေ့မှာ စိတ်မရှည်တဲ့ အမူအရာကို မပြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ပုံမှန်အသံနဲ့ပဲ ပြောပါ။ ကလေးက ခဏခဏ ဂျီကျတတ်နေရင် သင့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူနဲ့ အနီးဆုံးသူကြားက ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လေ့လာ ကြည့်ပါ။ မိသားစု မဟုတ်ဘဲ တခြားသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာလည်း ကလေးကို ဂျီမကျ သင့်ကြောင်း ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။
7. အမူအရာ ရိုင်းပြခြင်း
ကလေးရဲ့ အပြုအမူတွေကို သင်ပေးတဲ့အခါ အရမ်းကြီး မတင်းမာသင့်ပါဘူး။ မိသားစုဝင်တွေ အပေါ်မှာသာမက တခြားသူတွေ အပေါ်မှာပါ အလိုက်သိတတ်ဖို့၊ ယဉ်ကျေးဖို့အတွက် သင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား မိသားစုဝင်တွေက အမူအရာယဉ် ကျေးတာကို အမြဲ မြင်ရတဲ့အခါ ကလေးကလည်း အမူအရာ ယဉ်ကျေးသွားပါတယ်။